Deg Deg:Faroole Ka Hadlay Xaalada Jubbaland. – KHAATUMO NEWS
Deg Deg:Faroole Ka Hadlay Xaalada Jubbaland.
Waxaa haatan ka socda xarunta Baarlamaanka Puntland khudbado ay jeedinayaan masuuliyiin kala duwan maadaama maanta uu furmay kalfadhiga 45-aad ee Baarlamaanka Puntland, waxaana xiligani khudbad jeedinaya xildhibaan C/raxmaan Maxamed Faroole oo kamid ah xildhibaanada Aqalka sare ee Baarlamaanka dalka isla markaasna madaxweyne kasoo noqday Puntland, isagoona kula dar daarmaya xildhibaanada in ay adkeeyaan shuruuda kuna dhaqmaan Dastuurka.
Waxa uu ku nuux nuuxsaday xildhibaanku xaaladaha ka taagan dalka, isagoona Baarlamaanka Puntland ugu baaqay in ay si hufan u bartaan shuruucda iyo nidaamka Baarlamaanka dalka si looga taakuleeyo waxyaabo badan.
Faroole ayaa khudbadiisa kaga hadlay arimaha Jubbaland iyo doorashadii ka dhacay Kismaayo, waxaana uu sheegay in madaxweynaha Jubbaland uu yahay Axmed Madoobe isla markaasna ay aqoonsi buuxa siiyeen madaxdii ka qayb gashay caleema saarkiisa halka uu tilmaamay siyaasiyiinta kala ah C/naasir Seeraar iyo C/rashiid Xidig rag laga dhex hadlayo oo aan xataa ka tagin goobtii doorashadu ka dhacaysay isla markaasna ay dhibaato ka dhex wadaan shacabka.
Waxa uu sheegay in xili walba ay Puntlannd taageerayso Jubbaland marar kala duwana xooga uu saaray madaxweyne Denni in uu si hoose u dhameeyo khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dowladda federaalka Soomaaliya hasa yeeshee arintaasi aysan suurta galin.
Khudbada Faroole oo ah mid dheer ayaa xildhibaanku kaga hadlayaa arimo badan oo ay kamid yihiin amaanka, dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka iyo arimo kale
Previous Post: War Deg Deg Ah::Madaxweyne Siciid Denni oo ka hadlay soo celinta Laascaanood, Iyo Xaalada Gobolka Sanaag
Next Post: Deg Deg Daawo:Deni Oo U Hanjabay Xildhibaan Su aal Weydiiyay,